Stamp Clamp Vagadziri, Vatengesi - China Strain Clamp Factory
Nhanganyaya Tension clamp inoshandiswa pakona, kubatana, uye chinongedzo kubatana.Spiral aruminiyamu yakapfeka simbi waya ine yakasimba tensile simba, isina yakanyanyisa kushushikana, uye inoita basa mukudzivirira uye yekubatsira kuvhunduka kutora kweiyo optical tambo. Iyo yese seti ye fiber optic tambo tensioning. michina inosanganisira: tensioning pre - yakamisikidzwa waya, inotsigira kubatana michina. Iyo tambo yekubata simba haina pasi pe95% yesimba ratidziro tambo yetambo. Kuisirwa iko convenie ...
ZHEJIANG XINWO ELECTRIC CO., LTD NO.279 Weishiyi Road, Yueqing Economic Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China Email Email: cicizhao@xinwom.com Tel: +86 0577-62620816 Fax: +86 0577-62607785 Nhare mbozha: + 86 15057506489 Wechat ： +86 15057506489 WhatsApp ： +86 15057506489
Wedge mhando uye kuputira kavha （NXL,
Kunyorera NXL dzakateedzana wedge mhando yekumanikidza waya kiramba inokodzera 20kV uye pazasi kugovera mitsara, iyo yepamusoro insulated aruminiyamu conductor kana isina barekita inogadziriswa pane kuputira kwekona kana terminal tensioning tsvimbo, kuitira kugadzirisa kana kumisikidza iyo yepamusoro conductor, kuputira kavha uye tensioning waya kiramba inoenderana kushandiswa, tamba basa rekudzivirira kudzivirira. Chimiro chimiro 1. Sarudza iyo isingafungidzi hunhu yakakwira-intersity oxidation kuramba aruminiyamu chiwanikwa, hapana tsvina e ...
dhonza mhando yerudzi （NXJ）
Kunyorera NXJL nhevedzano yakakodzera kugadzirisa uye kukakavara pamusoro peyakavharidzirwa aruminiyamu waya waya (JKYL) ine insulator tambo kumagumo kana iwo maviri magumo ekukakavadzana chikamu che1-10kV uye pazasi Miti maererano netambo magadzirirwo akagadzirwa akasiyana epurasitiki wedge musimboti. Structure ficha Goko rakagadzirwa neanti-oxidate yakasimba simba aluminium alloy, isina simba remarara Musimboti wedge wakagadzirwa wekudzivirira unosimbisa mapurasitiki, uve nechengetedzo yakanaka Kwete kubvisa kuputira la ...
NXJG Series kuputira kugozha kiramba (achikanganisa mhando)
Kushanda: Iyo NXJ yakateedzana yakakodzera kugadzirisa uye kukakavara kwemuchadenga yakadzivirirwa aruminiyamu conductor (LKLYJ) ine insulator tambo kumagumo ese echikamu kana tensioned chidimbu che20KV uye pazasi Izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakasiyana mapurasitiki wedge cores zvinoenderana netambo maratidziro Structure ficha: 1Goko rakagadzirwa neanti - oxidation yakakwira - simba aruminiyamu chiwanikwa isina tepi kurasikirwa 2Wedge musimboti unogadzirwa yakasimba simba ouinjiniya mapurasitiki ane yakanaka kuputira performa ...
Kunyorera NJJ dzakateedzana wedge mhando kuputira tensioning tambo kiramba inokodzera kugadzirisa uye kukakavara pamusoro insulated tambo (JKLYJ) kumagumo kana ese ari maviri magumo ekukakavara chikamu che1kV uye pazasi pearuminiyamu tambo. Structure ficha The goko uye wedge moyo unogadzirwa nemasimba epamusoro epurasitiki Cable pasina kubvisa kuputira, inogona kuiswa zvakananga. Wedge mamiriro, nyore kuisa uye yakavimbika. Xinwom ibhizimusi repamusoro-soro rinotarisa kune Resec ...
Strain kiramba NY hydraulic type1
Strain kiramba, hydraulic mhando, NY akateedzana hydraulic kudzvinyirira tension clamp inoshandiswa kugadzirisa nekubatanidza conductor pane tension insulator tambo kana iyo fittings padanda neshongwe kuburikidza nekutsigira yakasimba tensile inogadzirwa nemufambisi. Yakagadzirwa neakakwira-simba aruminiyamu uye simbi zvinhu, zvine yakachena nzvimbo uye inogara nguva yekushandisa, panguva iyi zviri nyore kumisikidza, isina hysteresis kurasikirwa, yakaderera kabhoni uye simba rekuchengetedza. Dzvinyiriro dzinosunga, Simbi anchor iyo yese） Catalog Kwete ....
Strain kiramba （bhaudhi mhando, NLD dzakateedzana bhaudhi tension tambo inosunga anonyanya kushandiswa mukumira emagetsi emagetsi tambo kana chishandiso, yakamira conduction tambo uye mheni conductor uye zvakare inoshandiswa mukubatanidza iyo strain insulators nekujoinha Hardware kana kujoina iyo mheni conductor neiyo perch. Muviri wekusunga uye vachengeti isimbi inoyerera, iyo cotter-pini stainess simbi, zvimwe zvikamu isimbi. Bata simba rechitinha chinopfuura 95% kuputsa simba rekondakita. Ca ...
Strain kiramba NLL-1
Strain kiramba, bhaudhi mhando, NLL dzakateedzana bhaudhi mhando yekunetsekera kiramba inonyanya kushandiswa mukumira emagetsi emagetsi tambo kana chishandiso, yakamira conduction tambo uye mheni conductor uye zvakare inoshandiswa mukubatanidza iyo strain insulators nekujoinha Hardware kana kujoina iyo mheni conductor neiyo perch. Yakagadzirirwa mitsara yemuchadenga inosvika kusvika 30kV. 1) Iva akakodzera kugadzirisa insulated aruminiyamu conductor kana asina kupfeka aruminiyamu conductor pane iyo tenderera kona kana insulator yetuminal strain pole, kugadzirisa uye kubiridzira ...